ग्रीन हाउसको ग्यासबाट बिजुली ! - लोकसंवाद
ग्रीन हाउसको ग्यासबाट बिजुली !
काठमाडौं । अमेरिकाको राइस युनिभर्सिटिले ग्रीन हाउस ग्यासको प्रभाव कम गर्न महत्वपूर्ण खोज गरेको छ । जसद्वारा ग्रीन हाउस ग्यासलाई पुर्नप्रयोग गरेर तरल इन्धन बनाउन सकिने भएको छ ।
राइस युनिभर्सिटीका केमिकल तथा बायोमलिक्युलर इंजीनियर हाओटिआन वांगका अनुसार हालसम्म फार्मिक एसिड जसरी बनाइन्थ्यो त्यसमा यसलाई सफा गर्न धेरै महंगो तथा अत्यधिक ऊर्जा खपत हुने तरिकाको प्रयोग हुन्थ्यो । अब भने कार्बन डाई अक्साइडलाई शुद्ध तथा गाढा फार्मिक एसिडमा रुपान्तरणले यसको व्यावसायिक प्रयोगलाई पनि बढ़ावा मिल्नेछ ।
वांगका अनुसार फार्मिक एसिडलाई ईन्धनको रुपमा प्रयोग गरेर बिजुली पैदा गर्न सकिन्छ । यसबाट उत्पन्न हुने कार्बन डाई अक्साइडलाई फेरि रिसाइकल गरेर फार्मिक एसिड बनाउन सकिन्छ । फार्मिक एसिडको प्रयोग केमिकल इंडस्ट्रीमा अन्य केमिकलका लागि फीडस्टकका रुपमा पनि हुने गर्छ । साथै यसको प्रयोग हाइड्रोजनका लागि स्टोरेज मेटेरियलका रुपमा पनि हुने गर्छ ।
यसको प्रयोग हाइड्रोजनबाट चल्ने गाडीमा हुनसक्छ । वांग तथा उनको टीमले लगातार १०० घंटा सम्म नयाँ रियाक्टरबाट फार्मिक एसिड बनाएका छन् ।